ဟူစိန်အိဘ်အလီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်)
အယ် ဟူစိန်အိဘ် အလီ အိဘ် အဘီ သွာလိဘ် (အင်္ဂလိပ်: Al-Ḥusayn ibn Ali ibn Abi Talib; အာရပ်: الحسين ابن علي ابن أبي طالب‎; ၁၀ အောက်တိုဘာ ၆၂၅ – ၁၀ အောက်တိုဘာ ၆၈၀) (ရှာဘန် ၃ ရက်၊ ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ – ၁၀ Muharram AH ၆၁) သည် အစ္စလာမ် နဗီ (အာရပ်: نَـبِي‎, တမန်တော်) မိုဟာမက် ၏ မြေး နှင့် အလီ (ပထမဆုံး ရှီယာ အေမာမ် နှင့်ဆွန်နီ အစ္စလာမ် ၏ စတုတ္ထမြောက် Rashid caliph) နှင့် Fatimah (မိုဟာမက်၏ သမီး) တို့၏ သား ဖြစ်သည်။ သူသည် အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရှာဘာန် ၁၅ ရက် ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ တွင် မဒီနာမြို့တော်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ဟီဂျရီ ၆၁မိုဟရမ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲ၌ (မတရားလုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး) ရှဟီးဒ် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှီအာတို့သည် သူ့အား ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင် (အစ္စလာမ့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်) ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ ကွန်နီယသ် (သားသမီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောအမည်) မှာ အဘာအဘ်ဒုလ္လာဟ် ဖြစ်ပြီး သူ၏ဖခည်းမည်းတော်သည် အလီ(အ.စ)နှင့် မယ်တော်မှာ ဖှါတေမာ(စ.အ) ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည် တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ္လာဟ်(ဆွ)၏ မြေးတော်လည်းဖြစ်ပေသည်။ သူ၏သားတော် စဂျ်ဂျားဒ် သည် ရှီအာတို့၏ စတုထ္ထမြောက် အေမာမ်(ခေါင်းဆောင်) ဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသော မွစ်လင်(မ)တို့သည် သူ့အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သည့်အတွက်နှင့် သူသည် အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် မိမိ၏အသက်ကို စတေးခဲ့သည့်အတွက် အရိုအသေပြုအလေးထားကြလေသည်။
အေမာမ် ဟူစိန်အိဘ်အလီ ဗိမာန်
(625-10-10)၁၀ အောက်တိုဘာ၊ ၀၆၂၅
၁၀ အောက်တိုဘာ၊ ၀၆၈၀(680-10-10) (အသက် ၅၅)
ကရ်ဘလာမြို့၊ Umayyad section of Mesopotamia
ကရ်ဘလာ တိုက်ပွဲတွင် ခေါင်းဖြတ်ခံခဲ့ရ
အီရတ်နိုင်ငံ၊ ကရ်ဘလာမြို့ရှိ သူ၏ ဂူဗိမာန်
အစ္စလာမ် တမန်တော် မိုဟာမက်၏ မြေး၊ ကရ်ဘလာ တိုက်ပွဲ၊ ရှီယာ အေမာမ်
အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ်အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် မိမိ၏စစ်တပ်ကို ဟေဂျားဇ်မှကူဖှာသို့ သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌ အပြည့်တပ်ဆွဲထားလေသည်။ မည်သူကိုမျှ ထိုလမ်း၏အပြင်ထွက်ခွခွင့်မပြုခဲ့သလို ထိုလမ်းအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်လည်းမပြုခဲ့ပါ။ သိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ကူဖှာသို့သွားနေစဉ် လမ်းခရီး၌ စာပို့သမားနှင့် ဆုံမက်ခဲ့ပြီး မိမိစေလွှတ်ခဲ့သော မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ် လုပ်ကြံခံရမှုသတင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟေဂျားဇ်မှ မိမိနှင့်အတူပါလာသောသူတို့အား မိမိနှင့် လမ်းခွဲလိုက လမ်းခွဲနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပေမဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လမ်းခွဲသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ခရီးဆက်လာစဉ် လမ်းခုလပ်တွင် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီး၏ တပ်ဖွဲ့နှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ပြီး ထိုတပ်ဖွဲ့သည် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ရှေ့မဆက်ရန် တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် အပေါင်းအပါများကို စစ်မဖြစ်ပဲအသက်ရှင်လျှက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်လာရန်အတွက် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီးအား အမိန့်ပေးထားသည့်အတွက် သူသည်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား အမိန့်အတိုင်း အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဘက်မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နိုင်နဝါဒေသလက်အောက်ရှိ ကရ်ဘလာမည်သော နေရာတွင် စခန်းချခဲ့လေသည်။ မိုဟရမ်လ (၃)ရက်နေ့တွင် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်အိဘ်နေအဘီဝကားဒ် ဦးဆောင်သော စစ်သည်(၄၀၀၀)ရှိ တပ်ကြီးသည် ကရ်ဘလာ သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ် အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ၎င်းအား အီရန်နိုင်ငံရှိ " ရိုင်းယ်"မြို့ကို အပိုင်စားပေးမည်ဟု ကတိပေးထားခဲ့သည့်အတွက် လောဘစိတ်ဖြင့် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အမိန့်ကို နာခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် သူသည် အိဘ်နေဇေယားဒ် စိတ်ဆိုး၍ မိမိအားကြိမ်းမောင်းမှုကို မလိုလားသဖြင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်သော အကြံပြုမိန့်ကြားချက်များကို လက်မခံခဲ့ပေ။
မိုဟရမ်လ(၁၀)ရက်နေ့နံနက်တွင် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိ၏စစ်သည်များအတွင်း မြင်းစီးသူ(၃၀)ဦးနှင့် ခြေကျင်လျှောက်စစ်သည်(၄၂)ဦးအား အသင့်ပြင်ခဲ့လေသည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိမိစီးနင်းတော်၌ စီးနင်းလျှက် အိဘ်နေစအ်ဒ် စစ်တပ်ကြီး၏ရှေ့မှောက်တွင် မိန့်ခွန်းပေး၍ မိမိ၏အရိုက်အရာကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့လေသည်။ သို့သော် အိဘ်နေစအ်ဒ်ဘက်မှ ယဇီးဒ်နှင့်ဘိုင်အသ်ပြုသစ္စာခံရန်သာ ထပ်မံပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မှလည်း မည်သို့သောအခါမျှ ၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင် ကျေးကျွန်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းမိန့်ကြားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ဘက်မှ စစ်ပွဲကို အစပြုခဲ့ပြီး ၎င်း၏တပ်များသည် ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏ တဲနန်းများကို မီးဖြင့်ရှို့ခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း(ဇိုဟိုရ်)ပြီးချိန်တွင် ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏ စစ်သည်များသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ သူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏ ဘက်မှ တစ်ဦးပြီးတစ်ဦးအလျင်အမြန် ကျဆုံးလျက် ရှိနေခဲ့ပြီး ဘနီဟာရှင်(မ)အမျိုးသားစစ်သည်များသည် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများသာခဲ့သော်လည်းထွက်မပြေးခဲ့ကြပေ။၎င်းသူတို့သည်လည်း ကျဆုံးလျက် ရှိနေခဲ့၏။ သူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)သည် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက်လျက် ရှိခဲ့သည်။ ယာကူဘီသမိုင်းကျမ်းနှင့် အခြားသော ရှီအာသမိုင်းကျမ်းတို့၏အဆိုအရ ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)သည် မြောက်များစွာသောရန်သူတို့ကို သတ်ခဲ့သည် ဟုဖြစ်ပေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏ ဦးခေါင်းနှင့် လက်မောင်းတို့တွင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့မျက်နှာနှင့်ကျခဲ့သည်။ ထိုသို့အနေအထားတွင် စေနားန်အိဘ်နေအနစ်အိဘ်နေနခ်အီသည် သူ့အား ဓားဖြင့် ထပ်မံခုတ်ပြီး ဦးခေါင်းနှင့်ကိုယ်တစ်ခြားစီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖြင့် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ အိဘ်နေဇေယားဒ်တပ်များသည် လုယက်မှုများကို စတင်ပြုလုပ်လေတော့သည်။ အိဘ်နေစအ်ဒ်၏စစ်သည်များ စစ်မြေပြင်ကို စွန့်ခွာသွားသောအချိန်တွင် အလ်ကာဇရီယာ ရွာ၌နေထိုင်ကြသော အစဒ်မျိုးနွယ်စုဝင်တို့သည် ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏အလောင်းတော်နှင့် ကျန်အာဇာနည်အလောင်းတော်များအား ထိုစစ်မြေပြင်၌ပင် မြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဟူစိန်အိဘ်အလီ(အ.စ)၏ဦးခေါင်းတော်နှင့် ကျန်ဘနီဟာရှင်မျိုးနွယ်စုဝင် အာဇာနည်များ၏ဦးခေါင်းတော်များကို ကရ်ဘလာမှ ကူဖှာ ၊ ကူဖှာမှ ရှာမ်မြို့သို့ ယူဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။
ရှီအာတို့သည် ကရ်ဘလာအဖြစ်အပျက်အပေါ်နှစ်ပတ်လည်တိုင်း ဝမ်းနည်းခြင်းအခမ်းအနားများကို ကျင်းပလေ့ရှိနေကြသည်။ သို့သော် ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်သည် စစ်မှန်သောမွစ်လင်(မ)များ၏နက်ရှိုင်းလှသောနှလုံးသားအတွင်းထိထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေရာယူမှုသည် အောက်မေ့ဖွယ်ရာအခမ်းအနားများကျင်းပသည်ထက်ပင် ကြီမားေသည်။ သိုစိုင်း(န)အိဘ်နေအလီ(အ.စ)သည် မိမိ၏လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်ဝစေရန်အတွက် မိမိနှင့်မိမိ၏မိသားစုဝင်တို့၏အသက်ကို စတေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူသည် မိုအာဝေယာနှင့် ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ကို ချိုးဖေါက်မှုမပြုခဲ့ပေမဲ့ ထိုစာချုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ ယဇီးဒ်ဘက်မှ သစ္စာခံခိုင်းစေမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ သူသည် မိမိဖခမည်းတော်ကဲ့သို့ အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏အနွယ်ဝင်များ)သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏နောက်လိုက်(အွမ္မသ်)သားများအပေါ် အုပ်ချုပ်လမ်းညွှန်ရန်အတွက် အရှင်မြတ်ဘက်မှ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခဲ့သည် ဖြစ်ကြောင်းကို အပြည့်အဝယုံကြည်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကူဖှာမြို့သားတို့ဘက်မှ ရေးသားခဲ့သော စာများရောက်ရှိလာသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိတာဝန်ကြေပွန်စေရန်အလို့ငှာ ကူဖှာသို့ သွားရန် အသင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကရ်ဘလာတွင် ဘနီအိုမိုင်ယာဘက်မှ တခဏအတွင်းထိုသို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုများကြောင့် ဘနီအိုမိုင်ယာတို့၏ ရက်စက်ရုတ်မာမှုများသည် သမိုင်း၌တွင်သွားစေခဲ့သလို ကရ်ဘလာ စစ်ပွဲပြီးနောက် ရှီအာတို့အားလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ရန် တွန်းပို့ပေးခဲ့လေသည်။
ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ထကြွတော်လှန်မှုနှင့် သူ၏ကြမ္မာတရား သမိုင်းကြောင်းပြုစုရန် ရင်းမြစ်များပြင်ဆင်
ဖွားမြင်တော်မူသောအချိန်တွင် အဘိုးတော်သည် အေမာမ်ဟစန်(န)ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့တွင် ပြုကျင့်ခဲ့သည့်အတိုင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဖွားမြင်တော်မူချိန်တွင်လည်း အဇာန်ပေးခြင်းနှင့်အကီကာပြုလုပ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဘ္ဘာစ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ်မွသ်လိဘ်၏ဇနီးဖြစ်သူ အွမ်မေဖှဇ်လ်ထံသို့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရန် ပို့သခဲ့သည်။ သခင်မသည် မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သူ ကစမ်အိဘ်နေအဘ္ဘားစ်နှင့်အတူ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား နို့ချိုတိုက်ကျွေးခဲ့မှုကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် နို့ဆို့ဘက်ညီအစ်ကိုများဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကိုလိုင်နီမည်သော ပညာရှင်ကြီးမှ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် မိခင်ဖှာသေမာထံမှလွဲ၍အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံ၌ နို့ချိုသောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဟု ဆင့်ပြန်ထားလေသည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်အား ရှဘီးရ်၊ဟိုစိုင်း(န)ဟု မည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုအမည်နာမတော်များသည် ဟာရူန်(အ.စ)၏သားတော်အငယ်၏အမည်ဖြစ်ပေသည်။ အလီ(အ.စ)သည် မိမိသားတော်အမည်ကို ဟရ်ဘ် ဟုပေးလိုခဲ့သော်လည်း တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် မြေးတော်အား အမည်ပေးခဲ့သထားအတွက် သားတော်၏ထိုအမည်များကို နှစ်သက်ခဲ့လေသည်။ အခြားရေဝါယသ်တော်များတွင် ဟဘရှာတွင် ရှိနေခဲ့သော ဂျာအ်ဖရ်သွယားရ်၏ အမည်နာမတော်အတိုင်း အစပိုင်း၌ ဂျာအ်ဖရ်ဟု အေမာမ်ဟိုစိုင်းအားပေးခဲ့ကြပေမဲ့ တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်အား ဟိုစိုင်း(န)ဟူ၍သာပေးခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားလေသည်။ ရှီအာတို့က ဟိုစိုင်း(န)ဟူသောနာမတော်သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအမည်သာလျှင် ကနဦးမှ ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်း(န)ဟူသော နာမတော်နှစ်ခုသည် ဂျန္နသ်သုခဘုံမှ နာမတော်များဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အာရဗ်တို့အကြား မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဟု ရေဝါယသ်တော်များတွင် ဖော်ပြထားလေသည်။
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဖွားမြင်တော်မူပြီးချိန်မှစ၍ ပထမ(၇)နှစ်သည် အဖိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏လက်ပေါ်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မွစ်လင်(မ)တို့၏တမန်တော်ဖြစ်သလို သူ၏အဖိုးတော်ဖြစ်သည်။ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) သက်တော်(၇)နှစ်အရွယ်၌ပင် တမလွန်သို့ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) သည် အဘိုးတော်နှင့်နေခဲ့ရသည့်သက်တမ်းအလွန်နည်းပါးခဲ့သည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)သည် မြေးတော်ဟစန်-နေ-မွဂျ်သဘာနှင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့ကို အလွန်မှပင်ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြောင်းအား ရေဝါယသ်တော်များတွင် ဖော်ပြထားမှုများကို တွေ့မြင်နေရပေသည်။ဥပမာအနေဖြင့်တင်ပြရလျှင် (မည်သူမဆို သူနှစ်ဦးအား ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါက ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်အားချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပြီး အကြင်သူသည် သူနှစ်ဦးအား မုန်းတီးပါက ထိုသူသည် ကျွန်ုပ်အား မုန်းတီးခြင်းပင်ဖြစ်ချေသည်။ ဟစန်နှင့်ဟိုစိုင်န်သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံ လူငယ်များ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ရှီအာတို့သည် ဒုတိယ ဟဒီးတော်ကို ပိုမိုအလေးထားကြပြီး ထိုဟဒီးစ်တော်အရ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) တို့၏ အေမာမသ်သည် စစ်မှန်သော အေမာမသ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပေးထားကြသည်။ အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်သည် မြေးတော်နှစ်ပါးကို တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ပေါင်ပေါ်၌ ပွေ့ထိုင်ထားသလို တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ပုခုံးပေါ်တွင် တင်ထားလေ့ရှိသည်။ အဘိုးတော် ဝတ်ပြုချိန်များတွင် စဂျ်ဒါဟ် အနေအထားတွင် မိမိ၏ကျောခုံးပေါ်သို့ တက်လျက် ရှိနေခဲ့ပါလျှင်လည်း ထိုစဂျ်ဒါအနေအထားအတိုင်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေခဲ့လေ့ရှိသည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် တစ်ခါတစ်ရံ မြေးတော်နှစ်ပါးအား ပေါင်ပေါ်တွင် တင်ထားလျှက် လူတို့အကြားမိန့်ခွန်းများ ပြောလေ့ရှိခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)သည် မြေးတော်အကြီးဖြစ်သည့်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ) ကဲ့သို့ အဘိုးတော်မှ အလေးပေးမှုများရှိခဲ့သလို အဘိုးတော်နှင့် အချိန်ကာလများစွာ အတူနေခဲ့ရသည်။ မြေးတော်နှစ်ပါးလုံးသည် အဘိုးတော်နှင့် အလွန်ပင် ရုပ်ရည်အသွင်လက္ခဏာများ တူခဲ့ပေမဲ့ အေမာမ်ဟစန်(အ.စ) အဘိုးတော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် ပို၍တူလေသည်။ မြေးတော်နှစ်ပါးငယ်စဉ်ဘဝတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဓိကအကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်များမှာ မိုဘာဟေလာ ဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုနှစ်ပါးသည် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် မိုဘာဟေလာအာယသ်တော်၏ «ابناءَنا» ဟူသော ဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သူများသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ရေဝါယသ်တော်တစ်ခုအရ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် အိုမရ်အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း၌ ၎င်းမှ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မင်ဘရ် (တရားဟောစင်မြင့်)ပေါ်ထိုင်လျှက် ဟောပြောနေစဉ် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ရောက်ရှိလာပြီး တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ မင်ဘရ်ပေါ်ထိုင်သည့်အတွက် စောဒကတက်ခဲ့သည့်အခါ အိုမရ်သည် မိမိ၏ဟောပြောမှုကို တဝက်နှင့်ပင်ရပ်တန့်၍ မင်ဘရ်မှဆင်းခဲ့သည်။ အိုမရ်သည် မိမိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်း အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မြေးတော်များဖြစ်သည့်အတွက် အေမာမ်အလီ(အ.စ)နှင့် ဘဒဲရ်တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်သူများအားလုံးကို တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာမှ အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိသကဲ့သို့ အခွင့်အရေးရှိခဲ့လေသည်။ အချို့သော သမိုင်းကျမ်းများ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များအရ အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)တို့သည် ဟီဂျရီသက္ကရဦဇ် ၂၉ ခုနှစ် သွဘရီစ်တာန် ကိုအောင်နိုင်မှု့၌ ပါဝင်ခဲ့ကြလေသည်။.
အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာ၏ ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမျှ မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ သမိုင်းက သက်သေပေးနေသည်မှာ အေမာမ်အလီ(အ.စ)ရှီအာ(နောက်လိုက်)များအတွင်းမှ ဟွဂျ်ရ်အိဘ်နေအိုဒိုင်းယ်ဆိုသူသည် မာအ်ဝေယာအားတော်လှန်ရန်အတွက် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံအကြိမ်ကြိမ်လာရောက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘေလာဇရီ ၏ရေးသားချက်အရ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မာအ်ဝေယာအသက်ရှိစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုမှလုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း နှင့် ဤသို့မိန့်ဆိုရသည့်အဓိပ္ပာယ်မှာ အသင်တို့အမြဲတမ်းအသင့်ရှိကြပါလေ ယခုတစ်စုံတစ်ရာ မပြောဆိုလေနှင့် ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်။"မိုဟမ္မဒ်အေမားဒ်ဟာအေရီဆိုသည်မှ ရေးသားခဲ့သည်မှာ -နောင်တော်ဟစန်(အ.စ)လက်ထက်၌ပင် မာအ်ဝေယာနှင့်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီ(၁၀)နှစ်ကြာသည်အထိ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)နှင့် ခံယူချက်၌လည်းကောင်း ကြံဆမှုများ၌လည်းကောင်း အတွေးအခေါ်ပိုင်း၌လည်းကောင်း တူညီမှု:ရှိခဲ့သည်။ မည်မျှပင် မာအ်ဝေယာနှင့် စာချုပ်ချုပ်မှုကို မလိုလားခဲ့ပါစေ။ ထိုသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်း၌လည်း မာအ်ဝေယာနှင့် သစ္စာခံယူမှု(ဘိုင်အသ်ပြုလုပ်မှု)အလျဉ်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့သော် စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များအပေါ်ကတိသစ္စာတည်ခဲ့သည်။ မိုဟမ္မဒ်ဘာကိရ်မှ ရေဝါယသ်တစ်ခုကို ဆင့်ပြန်ထားသည်မှာ အေမာမ်ဟစန်နှင့်အေမာမ်ဟိုစိုင်န်း(အ.စ)တို့သည် မာအ်ဝေယာဘက်မှ ခန့်အပ်ထားသော မဒီနာမြို့စား မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်၏နောက်တွင် နမားဇ်ဝတ်ပြုခဲ့သည်ဟု ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆယိဒ် မိုဟမ္မဒ်အေမားဒီ ဟာအေရီသည် ရှီအာတို့၏ရင်းမြစ်ကျမ်းများတွင် ရေးသားထားသော အထောက်အထားများအတွင်းမှ ဟွရ်အာမိုလီ၏ အပြစ်ရှိသူတို့၏နောက်တွင် နမားဇ်ဝတ်ပြုခြင်းသည် မပိုင်ကြောင်း ဟုပြောကြားချက်ကို သက်သေပြု၍လည်းကောင်း သမိုင်းကျမ်းများတွင်ပါသော အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် မရ်ဝါန်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ဆံပုံများကို သက်သေထား၍ အထက်ပါ ရေဝါယသ်သည် မမှန်ကန်ကြောင်း ကိုထောက်ပြထားလေသည်။ ထိုကာများအတွင်း၌ပင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အဘူမရ်ရာဟ်အိဘ်နေမစ်အူးဒ်စကဖီး၏သမီးတော် လိုင်လားနှင့် ထိမ်းမြားမှုပြုခဲ့သည်။ ထိုမှ အလီအက္ကဘရ်(အ.စ)ကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ အဘူမရ်ရာဟ်သည် အမဝီမျိုးနွယ်စုတို့နှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားသဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ထံသို့ ငွေကြေးဥစ္စာများ မာအ်ဝေယာဘက်မှ အမြဲပို့သလေ့ရှိသည်ဟု ရေးသားကြသည်။၎င်းအပြင် အိဘ်နေစအ်ဒ်သည် မိမိကျမ်းတွင်ရေးသားထားသည်မှာ မာအ်ဝေယာသည် ဒီရ်ဟမ်(ရွှေဒင်္ဂါး)၃၀၀၀၀၀ ကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပို့ခဲ့သည်။(ဤသို့ရေးသားမှုများသည် အလျဉ်းခိုင်လုံမှုမရှိနိုင်ပါ စစ်မှန်သော သမိုင်းကျမ်းများကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ရှင်းလင်းစွာသိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မာအ်ဝေယာသည် အလီ(အ.စ)အား အမြဲတမ်း (လာအ်နသ်ပို့သ)ကျိန်ဆဲလေ့ရှိခဲ့သည်။ ရှီအာများကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချလေ့ရှိခဲ့သည်။ မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်မှလည်း မဒီနာမြို့အတွင်း ဘနီအိုမိုင်ယာနှင့်ဘနီဟာရှင်မ် မျိုးနွယ်စုနှစ်စုအကြားပြေလည်မှုရရှိရန်ကြိုးစားသူအားလုံး ရပ်တန်းကရပ်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထို့အပြင်မရ်ဝါန်အိဘ်နေဟကမ်သည် မာအ်ဝေယာ၏အမိန့်အရ ယဇီးဒ်နှင့်အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်၏သမီး အွမ္မေကွလ်စူမ်သခင်မ(အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)၏တူမတော်)အားထိမ်းမြားပေးပါရန် ကမ်းလှမ်းလာသည့်အခါ အေမာမ်ဟိုင်စိုင်းန်(အ.စ)ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် အွမ္မေကွလ်စူမ်သခင်မအား မိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘီဘက်ရ်၏သားတော် ကာစင်မ် နှင့်ထိမ်းမြားပေးလိုက်လေသည်။ ထို့အပြင် မရ်ဝါန်သည် မဒီနာမြို့အတွင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် အလီ(အ.စ)အပေါ် လာအ်နသ်ပို့သခဲ့သည့်အခါ ၎င်းအပေါ် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည်လွန်စွာမှပင် အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ခေတ်ကာလ၌ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသော မရ်ဝါန်နှင့် ၎င်း၏ဖခင်ဖြစ်သူ ဟကမ်တို့အား လာအ်နသ်ပို့သခဲ့လေသည်။
မာအ်ဝေယာသည် ယဇီးဒ် အပေါ်ဘိုင်အသ်(သစ္စာ)ခံယူကြရန် ဆော်ဩနေသော အချိန်တွင် အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ထိုကိစ္စအပေါ်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး မာအ်ဝေယာအား ရှုံ့ချခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ မာအ်ဝေယာပေးပို့ခဲ့သော လက်ဆောင်များကို အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)မှ လက်ခံယူလျက် ရှိခဲ့သည်ဟုအချို့အရေးအသားများတွင် ရေသားထားမှုကို ဆယိဒ်မိုဟမ္မဒ် အေမာဒီဟာအေရီက ငြင်းဆိုထားသည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ,စ)သည် ၎င်းမှပေးပို့ခဲ့သော လက်ဆောင်များကို မည်သို့သောအခါတွင်မျှ လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ ဟု ၎င်းမှ ယုံကြည်ထားသည်။ မာအ်ဝေယာသည် ယဇီးဒ်အားမှာကြားခဲ့သည်မှာ - အေမာမ်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ဆက်ဆံသည့်အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံရန်နှင့် သူ့အား မည်သို့သောအခါမျှ ဘိုင်အသ်ခံရယူရန်အတွက် အတင်းအကျပ် မလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
(၁) အလီယေမွရ်သဒွါ،(အ.စ) အေဒီ ၆၃၂ မှ ၆၆၁ (၂၉)နှစ်
(၂) ဟစန်နေမွဂျ်သဘာ (အ.စ)အေ၁မှ ၆၇၀ (၉)နှစ်
(၃)ဟိုစိုင်းန်နေရှဟီးဒ်အေဒီ၆၇၀ မှ ၆၈၀ (၁၀)နှစ်
(၄) အလီ အစ်စဂျားဒ်(အေဒီ၆၈၀မှ၇၁၂)(၃၂)နှစ်
(၅) မိုဟမ္မဒ်ဘာကိရ် (အေဒီ ၇၁၂မှ ၇၃၂)(၂၀)နှစ်
(၆) ဂျာအ်ဖရ် ဆွာဒိက် (အေဒီ ၇၃၂မှ ၇၆၅)(၃၃)နှစ်
(၇) မူစလ် ကာဇင်းမ် (အေဒီ ၇၆၅ မှ ၇၉၉) (၃၄)နှစ်
(၈) အလီ ရေဇာ (အေဒီ ၇၉၉ မှ ၈၁၈)(၁၈)နှစ်
(၉) မိုဟမ္မတကီ (အေဒီ ၈၁၈မှ ၈၃၅) (၁၈)နှစ်
(၁၀) အလီနကီ (အေဒီ ၈၃၅မှ ၈၆၈)(၃၃)နှစ်
(၁၁) ဟစန်အစ်ကရီ (အေဒီ ၈၆၈ မျ ၈၇၄)(၇)နှစ်
(၁၂) ဟွဂျ်ဂျသ်သေမဲဟ်ဒီ (၈၇၄ မှ ယနေ့ထိ)
↑ Shabbar၊ S.M.R. (1997)။ Story of the Holy Ka’aba။ Muhammadi Trust of Great Britain။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "An Attempt To Trace the Origin of the Rituals of Āshurā¸" (1 January 1993). Die Welt des Islams 33 (2): 161–181. doi:10.1163/157006093X00063. Retrieved on 19 July 2016.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ ၃.၇ al-Qarashi၊ Baqir Shareef (2007)။ The life of Imam Husain။ Qum: Ansariyan Publications။ p. 58။
↑ A Brief History of The Fourteen Infallibles။ Qum: Ansariyan Publications။ 2004။ p. 95။
↑ Kitab al-Irshad။ p. 198။
↑ S. Manzoor Rizvi။ The Sunshine Book။ books.google.com။ ISBN 1312600942။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟူစိန်အိဘ်အလီ&oldid=706508" မှ ရယူရန်